Ma rabtaa inaad xoqdo xogta? Toban Adeegyada Adeegyada Kaydka ee Faa'iido leh Waa inaad isku daydaa sida loo yareeyo
Webka qashin-saarid waa farsamo adag oo lagu dabaqay dhowr qalab 7). Qalabkani wuxuu la mid yahay boggag kala duwan oo isku mid ah sida aan u sameyno marka aan isticmaaleyno browser sida Firefox ama Chrome. Intaa waxaa dheer, duubista webka barnaamijyadu waxay muujiyaan xogta la soo saaro qaab la akhrisan karo. Waxay ka caawiyaan abuurista jihooyin badan oo ka faa'iideysta ganacsigeena.
Qalabka Calaamadinta Shabakada ugu Fiican:
Halkan waxaan ku siinnay liis ay ku qoran yihiin qalabkii ugu wanaagsanaa ee ugu faa'iido badan, oo qaar ka mid ah oo bilaash ah halka kuwa kalena la bixiyo.
1. Soo dejinta. io
Soo dejinta. Io waa caan ku ah tiknoolajiyadda horumarsan. Qalabka wuxuu ku habboon yahay xirfadlayaasha iyo kuwa aan xirfadlayaasha ahayn. Qalabkan shabakada ah ee buuggu ma aha oo kaliya inuu galo oo rogo tiro websaydo badan laakiin sidoo kale dhoofiyaa xogta la soo saaro CSV. Boqollaal kun oo bog ah iyo faylasha PDF ayaa la tuuri karaa saacad gudahood oo la soo dhoofin karo. io. Mawqifka dheeriga ahi waa inaadan u baahnayn inaad qorto koodhka. Bedelkeed, qalabkani wuxuu ka kooban yahay in ka badan 1000 API oo ku salaysan shuruudahaaga.
Dexi. io waxaa sidoo kale loo yaqaan CloudScrape. Barnaamijka soo saarista webka iyo barnaamijka saaridda xogta waxay ku habboon yihiin kuwa barnaamijka iyo kuwa xor ah. Waxaa si ballaaran loo ogaanayaa shabakadeeda ku salaysan shabakada iyo tifaftiraha kaas oo kuu fududeynaya inaad gasho iyo soo dejiso xogta la soo saaray oo ku saabsan darawalkaaga adag. Sidoo kale, tani waa ciriiri weyn oo shabakad ah oo badbaadin kara xogta sanduuqa. net ama Google Drive. Waxaad sidoo kale dhoofin kartaa xogtaada CSV iyo JSON.
Webaas. Io waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan oo cajiib ah oo shabakad ku salaysan shabakadda. Waxay siisaa si sahlan oo toos ah ufiirin xogta habaysan oo leh awood ay ku muujiso tirooyin tiro badan oo ah bogagga shabakadda hal API. Waxaad si sahlan u soo saari kartaa macluumaadkaaga isticmaalaya Websites. io oo ku keydso qaabab sida RSS, XML, iyo JSON.
Iyada oo kaliya $ 25 bishiiba, waxaad ka heli kartaa dhamaan sifooyinka cajiibka ah ee Scrapinghub. Tani waa codsi ku saleysan daruuro buuxisa shuruudaha saarista xogtaada si habboon. Scrapinghub waxaa ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'rotator proxy' kaas oo ku xajinaya bogaga internetka ee la ilaaliyo si habboon.
5. Muuqaal Sawireed
Muuqaal Sawirle ah ayaa weli ah soo saaridda macluumaad kale iyo barnaamijka macdanta qodista. Waxay ka tirtirtaa macluumaadka bogagga kala duwan, natiijooyinka ayaa la qaadaa waqtiga dhabta ah. Waxaad dhejin kartaa xogtaada la soo saaray si loo qaabeeyo sida SQL, JSON, XML, iyo CSV.
6. Hubinta Hub
Waa Firefox dheeraad ah oo si sahlan u fududayn kara raadinta shabakaddayada sababta oo ah hantidooda wax soo saarka. Hubinta Hubka ayaa si isku mid ah caan u ah barnaamijka iyo kuwa horumariya webka; qalabkan wuxuu ku kaydiyaa xogtaada qaabab la akhristo oo la isku bedeli karo, iyada oo la siinayo adeeg-celin user-friendly ah iyo adeegyo fiican.
Waa run in Gawaarida ay leedahay xaddididda xogta xaddidan, laakiin taasi macnaheedu maaha inay sahlanaan doonto cilmi baaristaada internetka. Xaqiiqdii, Warshadku waa doorashada koowaad ee shirkadaha kala duwan, khubarada SEO, iyo horumarinta app. Waad kaafin kartaa xogta ku qoran sanduuqa ama aad ku kaydin kartid xayeysiisyo kala duwan sida baahidaada. Nasiib darro, qalabkani ma raadin karo bogaga internetka.
8. 80 lugood
Waa codsi dalxiis oo xoog leh, dabacsan, oo faa'iido leh. Waxaad kala dooran kartaa 80 lugood sida shuruudahaaga, iyo qalabkani wuxuu soo gudbiyaa macluumaadka loo baahan yahay dhawr ilbidhiqsi.
Spinn3r waxay ka soo saartaa macluumaadka boggaga oo dhan, shabakadaha warbaahinta bulshada, wargeysyada iyo blogyada gaarka loo leeyahay, keydinta xogta JSON format. Ka sokow alaabooyinka soo saaridda xogta cajiibka ah, Spinn3r waxay hubisaa nabadgelyada iyo asturnaanta xogtaada mana ogolaanayso spammers inay xado.